Global Voices teny Malagasy » Niteraka Tanàna Haolo ao Meksika Ny Varotra Rongony sy Ny Ady Amin’ny Fikambanan-jiolahy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Oktobra 2015 5:45 GMT 1	 · Mpanoratra Connectas Nandika (en) i Ellie Weekes, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Meksika, Ady & Fifandirana, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Zon'olombelona
Ocurague, tanàna haolo. Sekoly izy ity taloha. Sary nindramina avy amin'ny olom-pirenen'i Ocurague, nahazoan-dalana.
Nosoratan'i Silber Meza sy Francisco Cuamea ny dika orizinalin'ity lahatsoratra ity ary navoaka tao amin'ny tranokalan'ny CONNECTAS.
Isan-kalina, zatra mivoaka ny trano mba hiafina any anaty kirihitr'ala ny mponina ao Ocurague, ao amin'ny faritra Sierra Madre ao andrefan'i Meksika. Te hihaino ny aloky ny fipoahan'ny fitaovam-piadiana, ny feon'ny fiara tsy mataho-dalana (4×4) sy ny fiarabe mibolisatra amin'ny lalan-tany mamovoka izy ireo.
Rehefa tonga indray fahanginana, mampitony ny tahony sy miverina any an-tokantranony ry zareo. Izany no famantarana fa lasa ny loza. Amin'izany alina izany, farafaharatsiny.
Tahaka izany ny fiainana tamin'ny taona 2011 tao amin'ity tanànan'i Sierra Madre Andrefana, anisan'ny kaomininin'i Sinaloa de Leyva ao avaratra-andrefan'ny firenena ary mifanakaiky be an'i Badiraguato ao amin'ny Fanjakana Sinaloa ity. Ao anatin'ny antsoina hoe “Telozoro Volamena” amin'ny varotra zava-mahadomelina Meksikana ity toerana ity, izay ahitana faritra be tendrombohitra ao amin'ny Fanjakana Durango, Chihuahua, ary Sinaloa.
Volana maro no lasa, nitombo ny tahotry ny olona ao an-toerana rehefa nivadika vono olona ny herisetra ao an-toerana noho ny fifandonana eo amin'ireo samy andian-jiolahy. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2012, naka an-keriny sy namono tovolahy iray avy ao an-tanàna manodidina ao San José dos Hornos ny vondrona iray mitam-piadiana. Mahatsiaro izao tantara manaraka izao i Esperanza Hernández, vehivavy teo amin'ny faha-50 taonany, teratany Ocurague ary nifindra monina tany an- tanànan'i Guamúchil ao amin'ny kaominin'i Salvador Alvarado ao Sinaloa:
Raha namono io tovolahy avy any San José dos Hornos io izy ireo, tsy sahy nandeha haka azy ny lehilahy, ka izahay vehivavy no nandeha, niaraka tamin'ny polisy inspekitera. Namela taratasy kely milaza ny vono olona izy ireo, izay nivaky hoe hitranga amin'ny mpanondro (mpanome vaovao) an’ ‘El Chapo’ (mpanao trafika zava-mahadomelina Joaquín Guzmán)” rehetra izao, satria an'ny Beltrán Levya (ireo mpirahalahy Marcos Arturo, Alfredo, Héctor, sy Carlos Beltrán, mpiara-dia taloha sy mpivahalo ankehitriny) ity faritra ity ankehitriny.
Nanome safidy ho an'ny olona ao an-tanàna ity fikambanan-jiolahy vaovao ity: hiaraka amin'izy ireo, mandao ny trano fonenana, na ho faty eo am-pelatanan'izy ireo, mahatsiahy i Hernández:
Namono fianakaviana iray manontolo izy ireo. Navela nitsitra teo ny vatana mangatsiakan'izy ireo. Nampitandrina ny filankevitra monisipalin'i Sinaloa de Levya ny inspekitera alohan'ny nialany. Zavatra tena mampivarahontsana sy tena sarotra atao izany: alaivo sary an-tsaina ny mamela vatana mangatsiaka eo, ary matahotra ny olona hafa tonga ao. Nisy olona nilaza fa nahavita nandoro ny saha mihitsy ny Beltrán Leyvas ary namono izay olona rehetra hitany tao izy ireo.
Miresaka somary manjavozavo i Hernández, raha mahatsiaro ny famonoana ireo olona 30 avy ao amin'ny faritra sy ny fifindra-monin'ireo fianakaviana 96 izay nonina tao Ocurague, izay efa tanàna haolo ankehitriny.
Nanjary be loatra ny horohoro: Nadositra tamin'ny 12 Janoary 2012 i Esperanza, niaraka tamin'ny fianakaviany sy ny tanàna iray manontolo. Nandao ny fivarotana enta-madinika niasany, ny tranony, ny andraikiny, sy ny fiainany. Ny zava-drehetra izy.
Nanomboka teo, nanjary mpikatroka ity reny tokan-tena, miady ho amin'ny fanatsarana ny toe-piainan'ny olona nafindra toerana, ity. Nahavita ny rejisitr'ireo niafara tao Guamúchil izy ary nanangona ny lisitr'ireo olona nankany avaratry ny Fanjakana, indrindra ireo fianakaviana nanorim-ponenana tao Guasave sy tao Choix.
Goavana ny ratram-po naterak'ity sesitany ity, hoy i Hernández manazava. Raha atomboka, tsy misy ny trano sy ny asa, ary eo koa ny tsy fahafantarana ny fiainan'ny tanàna, izay misy vidiny avokoa ny zava-dehetra, na dia ny rano aza:
Tsy hahavita hizatra ny fiainana eto izahay; tany aminay, raha lany ny etona, misy ny kitay. Manana akoho manatody izahay, manana hena sy fromazy, manana rano. Ocurague dia midika hoe “toerana nahaterahan'ny rano”; misy renirano tsy mba mety maina mihitsy ao. Tsy mba lany voankazo izahay tany, saingy eto kosa, tsy maintsy mividy ianao!
Anisan'ny fiovana ihany koa ny maripàna: tao Ocurague, nonina tao anatin'ny hazo kesika izy ireo, fa ankehitriny, miaritra maripàna mihoatra ny 40 degre izy ireo. Maro amin'ireo olona nafindra toerana no tsy mba manana milina fikopakopahana (ventilateur).
Mitohy tahaka ny tamin'ny voalohany ny fangatahan'ireo olona natao sesintany: ny fiverenan ‘ny fianakavian'izy ireo any an-tanindrazana miaraka ny fiantohana ny fiarovana azy ireo, na manampy azy ireo mba hahita asa, fianarana, ary onitra amin'ny tany sy zavatra hafa rehetra very teo am-pelantanan'ireo andian-jiolahin'ny zava-mahadomelina.
Tamin'ny 6 Martsa 2015, norahonan'ny vondrona fikambanan-jiolahy i Esperanza Hernández ary voatery nandositra indray, tany an-drenivohi-pirenena, Distrika Federaly tamin'ity indray mitoraka ity. Taorian'ny herinandro nanaovana antontan-taratasy sy tamin'ny fanampian'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ao an-toerana, nomen'ny Vaomiera Amerikana misahana ny zon'olombelona (CIDH) fiarovana avy amin'ny Fanjakana Meksikana izy sy ny fianakaviany. Rehefa afaka izany, niverina tany Sinaloa izy ary manohy miasa ho an'ireo olona niharan'ny famindran-toerana izy ankehitriny.
Araka ny tarehimarika avy amin'ny Foibe Manaramaso ny Famindra-toerana Anatiny ao amin'ny Filan-kevitra Norveziana ho misahana ny Mpitsoa-ponenana (IDMC-NRC) izay nampiasain'ny ny Firenena Mikambana tamin'ny faramparan'ny taona 2013 dia 33,3 tapitrisa farafahakeliny no isan'ireo mpitsoa-ponenana manerantany. Vokatry ny ady mitam-piadiana, herisetra ankapobeny, ary fanitsakitsahana ny zon'olombelona no mahatonga ny tarehimarika goavana.
Talohan'ny faramparan'ny taona 2013, olona 6,3 tapitrisa farafahakeliny no niharan'ny famindram-ponenana anatiny tao Amerika. Tao Kolombia ny ankamaroany, ary tsy mitsaha-mitombo io tarehimarika io. Ao Meksika, nanjary mahazatra ny fanerena an-tsesitany hatramin'ny 2006, raha lasa filohan'i Meksika i Felipe Calderón ary nanomboka ny ady miaramila mivantana miady amin'ny mpivarotra zava-mahadomelina. Ho setrin'izany, nizarazara ireo fikambanan-jiolahy, anisan'izy ireo ny vondron'i Sinaloa.
Nanomboka tamin'ny 2008, nisaraka ny “Federasiona” ao Sinaloa: manohitra an'i Beltrán Levya mirahalahy avy ankehitriny i Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera sy Ismael “El Mayo” Zambada. Nitarika azy ireo hiady teny hofehezina manerana ny firenena izany, indrindra ny faritra mamokatra rongony marijuana be indrindra: ao amin'ny faritra be tendrombohitra Sinaloa, Durango, ary Chihuahua.
Tsy nijanona ny famindram-ponenana an-katerena nanomboka teo, ary na dia eo aza ny fampandrosoana, mbola tsy nametraka politika mazava hanakanana izany ny Fanjakana Meksikana.
Nanakiana ny governemanta Meksikana ho tsy manaiky ny fisian'ny tsy fahampian'ny fiarovana ny olona i Laura Rubio Díaz Leal, mpianatry ny oniversite ao amin'ny Ivom-pampianarana Teknolojia Tsy Miankina ao Meksika (ITAM) ary iray amin'ireo vitsy nianatra ny trangam-piseho matetika famindram-ponenana olona izay heverina ho lesoky ny andrim-panjakana.
Nandritra ny fotoanan'i Felipe Calderón teo amin'ny governemanta, nandà ampahibemaso ny zava-misy izy fa nisy ny olana famindran-toerana, raha tsy niresaka momba izany tsotra izao fotsiny kosa i (Enrique) Peña. Tsy fantatro izay ratsy, mandà ny zava-misy sa ny tsy miraharaha izany.
Hatramin'ny taona 2011, nahavita fanadihadiana 121 momba ny famindran-toerana faobe tao Meksika i Diaz Leal.
Navoaka noho ny fiarahamiasa amin'ny CONNECTAS sy ny Global Voices Amerika Latina ity fanadihaiana ity, ary natontan'ny El Universal sy Noreste de México. Tsindrio ETO  raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ny tantaran'ny toerana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/27/75887/
 Sinaloa de Leyva : https://en.wikipedia.org/wiki/Sinaloa